21+ Subreddits tsara indrindra tokony harahinao (2020) - Lists
21+ Subreddits tsara indrindra tokony harahinao (2020)
Rehefa mahita an'i Reddit ianao dia 'MEMES' no zavatra tonga ao an-tsainao voalohany. Na izany aza, amin'ity lahatsoratra ity dia hiresaka momba ny subreddits tsara indrindra ho an'ny meme isika fa koa ny subreddits sasany izay manampy anao hanatsara ny fiainanao koa.
Ity lahatsoratra ity dia handalo subreddits ambony, izay azonao arahana aorian'ny fisoratana anarana. Reddit no tranokalan'ny tranonkala. Hatramin'ny 2013 dia nahazo laza malaza izy io. Ary koa, ny sasany amin'ireo atiny dank izay tsy azo apetraka amin'ny sehatra toy ny Instagram sy Facebook dia apetraka ao amin'ny Reddit, koa eny, mbola tsy voasivana i Reddit. Ny tombony tsara indrindra an'ny Reddit dia - loka. Raha manome loka anao ny mpikambana iray dia azonao atao ny mahazo farantsakely Reddit.
Na ianao YouTubers, dokam-barotra, na olo-malaza; ny olona rehetra dia ao amin'ny Reddit. Manantena aho fa efa fantatrareo ny atao hoe subreddit, noho izany andao isika hanomboka amin'ny Subreddits tsara indrindra hanaraka.
Mitady tranokala mahafinaritra sy mahaliana sasany? Raha eny jereo Tranonkala mahaliana 15 mahafinaritra afaka manandrana ianao.
Lisitry ny 21+ Subreddits tsara indrindra arahana amin'ny taona 2020:
Hitanao ho avy ity iray ity. Reddit no toerana tsara indrindra hahitana meme mahasoa. Taorian'ny andro lava niasana, iza no tsy te-hikorisa meme mahatsikaiky izay mahatonga ny androny. Izy io dia iray amin'ireo subreddits be mpanaraka indrindra miaraka amin'ny fanisana mpikambana 13.549.066 (sahabo ho 13 tapitrisa). Somary mendrika ny atiny ary afaka mamoaka chuckle etsy sy eroa. Na dia sokajinao amin'ny alalàn'ny hafanana indrindra ao anatin'ny 24 ora aza ianao, dia hovelomina 138k ny lahatsoratra ambony, mba hahafahanao maminavina hoe manao ahoana ny lazany ity subreddit ity.
Meme maro no mamorona ilay subreddit r / memes averina apetraka amin'ny r / dankmemes; noho izany mitazona ny laharana faharoa izy. Ny hatsikana mainty no lakilen'ity fanovana ity. Raha miditra amin'ny dank, maizina ary maneso ianao dia ity no subreddit tonga lafatra ho anao. Ny isan'ny mpikambana amin'ity subreddit ity dia 4.181.623 (sahabo ho 4 tapitrisa), ary ny naoty nafana indrindra manodidina ny 78.0k- 84k, izay sahaza azy. Na izany aza, mety hitan'ny olona sasany fa tsy mahafinaritra izany, ka maninona raha tsy manandrana.
Ity no fiaraha-miasa lehibe indrindra eo amin'ny Youtube sy Reddit. Tonga tao Reddit ny mpanjakan'ny Youtube. Pewdiepie no YouTuber be mpamaky indrindra miaraka amina mpanjifa 107 tapitrisa. Ahitana meme mahatsikaiky indrindra eto an-tany ny fanavaozana azy. Mety ho hitanao fa mifantoka tanteraka amin'i Pewdiepie ihany koa izany, fa izany no antony nanokafany subreddit. Izy ireo koa dia manana haitao mpankafy sy atiny hafa hitazomana ilay subreddit ho mahaliana. Ny isan'ny mpikambana dia 3.334.494 (manodidina ny 3 tapitrisa).
Ity subreddit ity dia ho an'ny olona izay tia hatsikana maivana ary tsy te-hametraka fotoana be dia be hieritreritra ny dikany lalina ananan'ny meme. Mifanohitra tanteraka amin'ny dihy dany sy vazivazy mainty izany. Ity dia subreddit kely ary manana vazivazy mety. Ny isan'ny mpikambana dia 249k. Raha tsy mampiasa subreddits iray ianao izay misy mpikambana marobe mitsara anao dia tokony hanandramanao ity iray ity.
Ity no subreddit raha te hahalala ny maodely meme farany ianao. Ireo meme dia mifandraika amin'ny lohahevitra isan-karazany ka hisy meme iray farafaharatsiny mba hanomezana isa anao. Raha miditra sary ianao, ny meme rehetra dia aseho ho sary. Raha amin'ny r / antijokes, ny meme rehetra dia faritana amin'ny endrika fanazavana. Goavana tokoa ny vondrom-piarahamonina, miaraka amina mpikambana 8.36 tapitrisa.
6. r / Novonoina olona
Te hanendy ny, ry namanao, amin'ny comebacks mahatsikaiky? Midira amin'ity subreddit ity. MurderedBy Words dia fanangonana iray amin'ireo valiny lozabe indrindra amin'ny endrika meme. Araka ny tondroin'ilay anarany dia mila mihazakazaka haingana ilay olona ary mahazo mihoatra ny fandoroana mba hampitony ny hafanana. Ny isan'ny mpikambana amin'ity subreddit ity dia 2.07 tapitrisa.
7. r / saka
Lisitry ny subreddit iza no feno tsy misy meme saka ?. Ny saka dia zavaboary mahafinaritra, ary sarobidy kokoa ny mijery meme momba azy ireo. Ity subreddit ity dia misy ny sary mahafatifaty saka rehetra azonao eritreretina. GIF sy horonan-tsary koa eo mba hohaninao. Mipetraha ary miala sasatra amin'ny fijerena meme saka sasany. Ny isan'ny mpikambana amin'ity fanontana ity dia 2.4 tapitrisa.
8. r / lalao
Raha gamer ianao ary sarotra aminao ny manangona vaovao sy mangataka fanampiana, ity no subreddit tonga lafatra ho anao. Fampandrenesana vaovao, lalao vaovao, famaritana ary meme rehetra dia voarakitra ao amin'ity subreddit ity. Ny vondrom-piarahamonina dia midadasika sy manampy be, toy ny mpilalao rehetra. Ny isan'ny mpikambana dia 28.566.335 (28.5 tapitrisa). Ity dia mikapoka ny ankamaroan'ny subreddits ao amin'ny lisitray raha jerena ny fanisan'ny mpikambana. Amin'ny fahatongavan'ireo taranaka ho avy, dia tokony hojerenao ny filaharana sy ny lalao tohanan'izy ireo. Rehefa miditra amin'ity subreddit ity ianao dia havaozina amin'ny vaovao farany sy ny lalao fandefasana, ka azo antoka fa iray hijerena izany.
Amin'ny anarany, mety efa noheverinao fa ity subreddit ity dia natokana ho an'ireo mpilalao PC rehetra any. Araka ny fantatsika rehetra, ny fananganana PC dia tsy sombim-mofomamy. Ity subreddit ity dia manampy anao hifandray amin'ireo singa farany farany sy ny fomba fanangonana azy ireo. Miasa bebe kokoa toy ny forum izy hahafahanao mahafantatra ny antsipiriany tsara indrindra ho an'ny fananganana anao. Azonao atao koa ny mangataka fanampiana raha tsy mandeha tsara ny PC-nao. Hampahafantarina anao ihany koa ny momba ny fanomezana omen'ny orinasa. Rehefa miditra ianao dia hohenoinao indray ny PC mpamono console, izay afaka milalao amin'ny ambaratonga mitovy fa amin'ny vidiny ambany.
Ho an'ny fanavaozam-baovao rehetra amin'ny PlayStation exclusives sy ny lohateny vao natomboka dia tokony hiditra amin'ity subreddit ity ianao. Araka ny fantatrao, PlayStation dia mamoaka lalao maimaim-poana roa isam-bolana ho an'ireo mpampiasa PlayStation miampy. Izy io koa dia hanana meme relatable mahafinaritra, izay ny mpampiasa ps4 ihany no ho afaka hahita izay lalao maimaim-poana na dia alohan'ny hahatongavany ao amin'ny magazay PlayStation aza. Ny fifanarahana dia avoaka amin'ity subreddit ity ihany koa; havaozina eo noho eo ianao rehefa misy ny varotra midadasika toa ny varotra zoma mainty sy ny varotra Halloween. Ny isan'ny mpikambana dia 3.807.499 (3 tapitrisa). Tena mitovy amin'ny r / pcmasterrace izy io, fa ho an'ny konsol kosa.
Aza matahotra ireo mpankafy XBOX fa voasaronay ianareo. Ny fampahalalana farany momba ny lalao vaovao, ny hevitra ary ny console dia hita ao amin'ity subreddit ity. Na ny fampahalalana momba ny lalao aza dia mandalo farany, ho fantatrao mialoha izay lalao ho afaka. Ny daty famarotana rehetra sy ny famoahana manokana dia resahina ato amin'ity fanovana ity ihany koa. Na dia mampiseho hadisoana sasantsasany aza ny Xbox anao, dia voasaron'ny fiarahamonina ianao. Ny isan'ny mpikambana dia 225.882 (225k). Ny rehetra dia mpankafy eto ary manome fanohanana lehibe ho an'ny Xbox.
Henonao tsara izany! Ny battle royale misy isa tsara indrindra dia ao amin'ny subreddit. Eto ny olona dia mifanakalo hevitra momba ny vanim-potoana vaovao, ary ny ady farany dia mandalo ireo bundle manokana rehetra, sy ny maro hafa. Satria sarotra ny manaraka ny lalao fa tsy ny subreddits dia alao decode ho anao miaraka amin'ny fanampian'ny mijery ireo rakitra lalao. Ho fantatrao koa hoe iza avy ireo hoditra ho hita ao amin'ilay fivarotana entana. Miresaka momba ny tetika sy paikady tokony ampiharinao koa izy ireo hanatsarana ny lalao. Ny isan'ny mpikambana dia goavambe tokoa ho an'ny subreddit mifototra amin'ny lalao iray izay 1.4 tapitrisa.
Minecraft dia iray amin'ireo lalao multiplayer an-tserasera tsara indrindra. Noho ny fitakiana sary kely indrindra dia gamer maro no misafidy ity lalao ity. Raha tianao ny Minecraft ary liana amin'ny fomba handresena ilay dragona ender dia jereo tsara ilay subreddit. Ny isan'ny mpikambana amin'ity subreddit ity dia 4.3 tapitrisa. Zo tsy dia lehibe loatra? Ny antony bebe kokoa rehetra hidirana amin'ity subreddit ity.
11. r / zona ady
Warzone dia tao amin'ny vaovao hatramin'ny namoahana azy tamin'ny taona 2019. Nanjary nalaza be izy io. Tao anatin'ny dimy volana, mpilalao 75 tapitrisa no nanatevin-daharana ny lalao miantso adidy. Raha tianao ny Warzone Call of duty ary liana amin'ny fizotran'ny tantara sy paikady ianao dia tokony hojerenao. Ny mpikambana koa dia manao meme mahasoa hanesoesoana antso adidy satria iza no tsy manao izany? Hahafinaritra anao ity subreddit ity. Ny isan'ny mpikambana dia 112k.
12. r / fandaharana
Raha programmer ianao, ity no subreddit ho anao. Na hadisoana izany, ny bibikely ao amin'ny kaody na ny rafitrao dia tsy afaka manao asa manokana. Hovaliana amin'ity subreddit ity ny valinteninao rehetra. Miorina amin'ny coding avokoa izy io, koa rakotra lohahevitra toa ny python, ny firafitry ny data java ary ny algorithma. Ny isan'ny mpikambana dia manodidina ny 2 tapitrisa amin'ity subreddit ity. Mety mila miandry fotoana kely ianao vao hahavaly ny valinteninao amin'ny valin-kevitra, fa mendrika ny fiandrasana rehetra azonao eritreretina. Ho fantatra tsara aminao ihany koa ny momba ny fironana vaovao arahin'ireo mpandahatra programa ankehitriny.
13. r / fitsangatsanganana
Tia mandinika toerana samihafa sy mianatra momba azy ireo? Tokony hiditra amin'ity subreddit ity ianao. Ny fampahalalana rehetra, na dia ny fomba fivezivezena sy ny toerana hafa hitsidihana azy aza dia omena amin'ity subreddit ity. Ny olona aza mamerina mijery na tiany tranonkala iray na tsia. Ity dia mety ho mpitari-dalana anao maimaim-poana ary manampy anao handamina ny fialan-tsasatra nofinofisinao. Ny isan'ny mpikambana dia 5.421.464 (5 tapitrisa). Raha misy fisalasalana ao an-tsainao momba ny toerana manokana dia manontania ny Redditors, dia hampahafantatra anao ny heviny izy ireo.
14. r / sakafo
Tonga ny fotoana hamoahana ny sakafo ara-tsakafo ao aminao. Ity subreddit ity dia misy karazan-tsakafo rehetra eto an-tany. Ao amin'ny sehatra fanehoan-kevitra dia ho hitanao ny fomba fanamboarana ny fomba anaovana izany sakafo izany. Ho hitanao amin'ny karazan-tsakafo sy sakafo atoandro ary sakafo hariva ny zava-drehetra. Ny isan'ny mpikambana amin'ity fanontana ity dia 20,02 tapitrisa. Araho ary ny entam-barotrao mandritra ny herinandro ary mandraisa anjara.
15. r / sarimihetsika
Aorian'ny fidirana amin'ity subreddit ity dia hijery sarimihetsika mahafinaritra ianao. Ny Redditors rehetra dia manome soso-kevitra sarimihetsika vaovao izay mety tsara amin'ny tranombokinao. Azonao atao koa ny milaza amin'izy ireo momba ny tsironao / karazana, ary hanampy anao hahita sarimihetsika mahafinaritra izy ireo. Tsy izany ihany fa mbola miresaka momba ny sarimihetsika mendrika ny fotoana sy ezaka koa izy ireo. Resahin'izy ireo ihany koa ny daty namoahana sy ny vaovao momba ny mpilalao. Toy ny mini IMDB ao anatin'ny Reddit izy io. Ny isan'ny mpikambana dia 24,17 tapitrisa.
Ho an'ireo tia anime rehetra any, ity no subreddit ho anao. Lasa ny andro izay niheveran'ny olona ho toy ny tantara an-tsary fotsiny ny anime. Nanjary mihoatra lavitra noho izany. Vaovao farany sy fifanakalozan-kevitra momba ny anime tianao indrindra. Hampahafantatra anao koa izy ireo hoe fizarana inona no mameno. Ny isan'ny mpikambana ao amin'ity subreddit ity dia 1,97 tapitrisa.
17. r / vaovao
Tsy ny rehetra no liana amin'ny vaovao, azontsika izany, saingy tsy hampaninona ny mampitombo ny fahalalanao ankapobeny. Ity subreddit ity dia misy fampahalalana manerana an'izao tontolo izao ary hanampy anao hahafantatra tsara an'izao tontolo izao. Mandehana tsy misy taratasy ary midira amin'ity subreddit ity mba hanaraka izay mitranga amin'ity tontolo ity. Ny isan'ny mpikambana amin'ity fanontana ity dia 22,2 tapitrisa. Olona roa amby roapolo tapitrisa no tsy mety diso, ary tsy misy ity subreddit ity tsy manohana vaovao sandoka raha izany no mampanahy anao.
Hanjary matotra ny raharaha amin'ity subreddit ity. Azonao atao ny mahalala ny hetsika nofap, izay nahazo laza be tato ho ato. Raha nanapa-kevitra ny hanao nofap ianao, dia tokony hiditra amin'ity fanovana ity. Izy io aza dia manana kaontera hanarahana ny fandrosoanao. Ny mpikambana rehetra dia tena hanohana ny fanapaha-kevitrao hiditra amin'ny hetsika nofap ary hanampy anao hahatratra ny tanjonao. Ny isan'ny mpikambana ao amin'ity subreddit ity dia 772,293 (772k). Na dia vitsy aza ny isan'ny mpikambana, ity no vondrom-piarahamonina manohana indrindra ao amin'ny Reddit.
Ho famaranana, araka ny hitanao, dia nozarainay tamin'ny sokajy telo samy hafa ny lahatsoratra. MEMES, Lifestyle, ary Gaming, ireo no soso-kevitra tsara indrindra avy amin'ny tranokalanay ho anao. Azonao atao ny manatevin-daharana ireo subreddits araka ny safidinao. Manantena aho fa rehefa avy namaky ny lahatsoratray ianareo, dia nahazo ny hevitra momba ny subreddits tsara indrindra arahana. Raha manana sosokevitra fanampiny na add-on an'ireto ianao dia ampahafantaro anay ao amin'ny boaty hevitra etsy ambany.
Sarimihetsika 50 tsara indrindra amin'ny horonan-tsary voalohany
Inona no ananan'i Neny vanim-potoana faha-8 ho anao?
Saison 2 zato: Havaozina ve ity andiany ity amin'ity indray mitoraka ity? Havaozina ve ity andiany ity amin'ity indray mitoraka ity?
sarimihetsika feno harry potter roa
hbo max vs hbo izao dia vidiny
aiza no hijerena maimaim-poana an'i netflix
https / aka.ms / remoteconnect
manaova fanadihadiana momba ny karatra fanomezana Amazon
misoratra anarana roblox hilalao